Izindaba - Faka esikhundleni “isihlungi” sesihlanza amanzi ekhaya lakho. Khumbula ukubuya uzophuza "amanzi ahlanzekile"!
Faka esikhundleni “isihlungi” sesihlanza amanzi ekhaya lakho. Khumbula ukubuya uzophuza "amanzi ahlanzekile"!
Manje izimo zokuphila zabantu ziya ngokuba ngcono futhi ziba ngcono, futhi sebeqalile ukulandela ikhwalithi yempilo. Akunandaba ukuthi uyadla, uyaphuza noma uyayisebenzisa yini empilweni, udinga impilo, futhi uma kunesidingo, uzosebenzisa eminye imishini ukusiza, ukuze ukwazi ukuqinisekisa ukuthi izidingo zansuku zonke ziphephile futhi ziphilile.
Amanzi yinto ebaluleke kakhulu ezimpilweni zethu, futhi manje abantu abaningi bayaqala ukunaka ukuphepha kokusetshenziswa kwamanzi. Ngokuvamile, amanzi asezindlini zethu ahanjiswa izitshalo zamanzi ngamapayipi. Lolu hlobo lwamanzi lufakwa amagciwane futhi luhlanzwe, kepha amanye amagesi abulala amagciwane noma izinto zizosala emanzini, futhi kuzoba nokugqwala emapayipini amanzi. Ukuchitheka, futhi ngaleyo ndlela kuzongena ezimpilweni zethu ngokuhamba kwepayipi nokugeleza kwamanzi.
Kungenxa yalezi zizathu ukuthi imindeni eminingi manje isifaka izinto zokuhlanza amanzi ukusiza ukuhlanza imithombo yamanzi. Ngoba isihlanza amanzi siqukethe into yokuhlunga, singamunca ukungcola okuningi kanye namagciwane asemanzini ompompi, ukuze izinsiza zamanzi eziphathwe isihlanza amanzi ziphephe futhi zihlanzeke ekuphuzeni noma ekuphekeni. Kodwa-ke, ngoba into yokuhlunga isetshenziselwa ukuhlunga, into yokuhlunga nayo idinga ukushintshwa. Kufanele ishintshwe kaningi kangakanani?
Kulezi zinsuku, izinhlobo zokuhlanza amanzi emakethe zehlukile, futhi nokusetshenziswa kwemvelo kwezinto zokuhlunga nakho kwehlukile, futhi nentengo yohlobo ngalunye lokufaka isihlungi nayo yehluke kakhulu. IHuahua namuhla ikutshela ukuthi uzishintsha kangaki izinhlobo ezintathu zezinto zokuhlunga emakethe. impilo!
1. Isihlungi sekhabhoni esenziwe sasebenza
Sonke siyazi ukuthi i-activated carbon iyinto ene-adsorption enamandla, ngakho-ke abakhiqizi abaningi babahlanza amanzi bayisebenzisa njengesihlungi esiyinhloko sesihlungi samanzi esihlanza amanzi. Ngokuvamile, lapho i-activated carbon isetshenziswa njengesihlungi, kufanele ihlukaniswe ibe yikhabhoni eyenziwe yasebenza ngaphambili kanye ne-post-activated carbon, ukuze amazinga womabili asetshenziswe ndawonye ukumunca iphunga eleqile ne-chlorine emithonjeni yamanzi. Kodwa-ke, ikhaboni elicushiwe lizophinde ligcwaliswe ngemuva kokusetshenziswa kwesikhathi eside, futhi imvamisa idinga ukushintshwa njalo ezinyangeni eziyisithupha kuya onyakeni.
I-PP ukotini uhlobo lwento ehlunga izinhlayiya ezinkulu emanzini, njengokuthi hlobo luni lwensika nokungcola kwensimbi kungathembela kulo ukuvimba ngaphandle komnyango. Ilingana ne-gauze, esongwe ngepayipi ukusiza ukuhlunga imfucumfucu, ngoba izinto ezihluzwayo zikhulu ngokwedlulele, ngakho-ke impilo yensizakalo izofushane kunamanzi angenayo, cishe izinyanga ezi-4 okumele zenziwe zishintshwe.
3. Ulwelwesi lwe-Ultrafiltration
Uma uzwa igama le-ulwelwesi lwe-ultrafiltration, kufanele wazi ukuthi ivolumu yalokho ekuhlungayo ngokuvamile incane kakhulu. Ngemuva kokuhlungwa, amanzi ompompi angaguqulwa ngokuphelele abe ngamanzi amsulwa. Ngenxa yekhwalithi yayo yokuhlunga ephansi, isikhathi sokufaka esikhundleni sizoba side ngokwendalo, imvamisa kube kanye njalo eminyakeni emibili.
Lapho kuhlanzwa amanzi kusetshenziswa, into ebaluleke kakhulu ukubala into yokuhlunga, ngakho-ke sidinga ukuyishintsha futhi siyihlanze ngesikhathi, ukuze siqinisekise ukuthi siphuza amanzi ahlanzekile njalo!
Isikhathi Iposi: Jul-09-2020